Hooyo sheeko xeeldheer ah: hooyada sharafta leh ee YouTube, waxay la tahay ilmo iyada leh - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »Hooyo sheeko xamaasad leh: Hooyo tusaale ah oo YouTube ah, waxay u tahay ilmo leh carruurteeda
Hooyo sheeko xamaasad leh: Hooyo tusaale ah oo YouTube ah, waxay u tahay ilmo leh caruurteeda
In kasta oo ay tahay dadaal wadajir ah si loo ilaaliyo xuquuqda carruurta, xadgudubka carruurta yaryar ayaa weli ah dhibaato caalami ah. sida laga soo xigtay Ururka Caafimaadka Adduunka mid ka mid ah afarta carruur ah ee adduunka ah ayaa la kulma nooc ka mid ah abuse.
Nambarada khatarta leh waxay tilmaamayaan in ilmuhu uu nagu soo gaadhi karo nala soo xiriir annaga oon ogaanno. Kiis cusub oo Maraykanku na tusayo in tani ay dhici karto meesha aan ugu yaraan ka fileyno.
Machelle Hobson wuxuu ka mid ahaa hooyooyinka caan ka ah YouTube. Kanaalka Fantasy Adventures channel wuxuu lahaa in ka badan 300 000 oo daawaday khibradaha maalinlaha ah ee carruurtiisa 7 ee aan haysanin faahfaahin xaqiiqda naxdin leh.
Hooyo Arizona ayaa lagu eedeeyay in ay si xun ula dhaqantay caruurta - xiddigo ka mid ah sheekooyinka YouTube-ka ah "Channel Fantastic Adventures", oo ka badan 250 million views.
48-sano jir ah Hackney Machete ayaa lagu eedeeyay in ay caruurteeda carareen.
Halkan waa @jamieyuccas pic.twitter.com/wudoEs32Kh
Hooyo Arizona ayaa lagu eedeeyay inay si xun ula dhaqantay todobada carruur ah ee la korsaday - xiddigaha fiidiyowyadeeda YouTube-ka ah "Channel Adventures", taas oo lagu eegay wax ka badan 250 million jeer.
Machelle Hackney, oo ah 48, ayaa u ogolaan lahayd caruurteeda inay gaajooto.
Waa halkan @jamieyuccas pic.twitter.com/wudoEs32Kh
- CBS Evening News (@CBSEveningNews) 20 Maarso 2019
Si kastaba ha noqotee, wax kastoo isbeddelay markii gabadheeda 19 sano ka hor ay u cambaareysay xadgudubka. Waxay sheegtay in Machelle ay caruurteeda ku xirtay xero ku taala maalmo la'aan cunto ama biyo waxaana lagu ciqaabay hab aad u xun.
Maricopa, AZ- Bilayska oo xiray xiddiga YouTube ee lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay 7 carruurta korsanaya, channel YouTube "Advent Adventures" pic.twitter.com/w9TTsAja1J
- HADDALKA CADRE, LLC (Hawlaha Hore) March 20, 2019
Maricopa, AZ - Booliska ayaa xirxiray YouTube Weerarkii 7 Caruurta Caruurteyda ah, YouTube Channel "Advent Adventures" pic.twitter.com/w9TTsAja1J
- CILME-CADRE, LLC (@THREATframe) 20 Maarso 2019
Later, markii bilaysku helay helitaanka oggalaansho ay ku raadinayaan guriga haweeneyda, waxay ogaatay in carruurtu xaqiiqdii nafaqo-xumo ba'ani hayso oo ay daacad yihiin da'dooda. Ma ayan tagin dugsiga.
Intaa ka sokow, caruurtu waxay sharxeen in markii ayan rabin inay ka qaybqaataan fiidiyowyada ama ay iloobaan ilbiriqooda, haweeneydu waxay ku ciqaabtay iyaga oo isticmaalaya buufin qasacadaysan ama iyaga oo siinaya barafka.
Hooyo YouTube ah ayaa la kulma eedeymo badan oo ku saabsan xadgudubka caruurta. Si kastaba ha noqotee, xaaladani waxay si buuxda u ogaatay deriska, kuwaas oo xitaa daawanayay fiidiyowyada waxayna jecel yihiin qoyska quruxda badan!
Marka, sidee baad ku ogaaneysaa marka cunug lagu xumeeyo? Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah tilmaamayaasha
Ilmuhu ma tago dugsiga muddo dheer ama uusan tagin dugsiga dhan.
Dharka cunugga uma muuqanayo inuu u dhigmo cimilada.
Ilmuhu wuxuu u eg yahay dhererkiisa da'diisa ama uusan u muuqan qof caafimaad qaba.
Ilmuhu wuxuu leeyahay dhibaatooyin bulsho.
Ilmuhu waa gaajo ama harraad.
Xaaladdan, dareen gaar ah waa in la siiyaa habdhaqanka cunugga iyo qoyska. Haddii aad haysatid sababta aad u aaminsan tahay in wax khaldan yahay, la xiriir maamulka deegaanka. Xusuuso in caruurtu yihiin mustaqbalka adduunkeena iyo in wanaaggoodu yahay qof walba mas'uuliyadiisu.
Qodobka qodobkan waxaa loogu talagalay oo keliya ujeedooyinka macluumaadka oo kaliya ma beddelo ra'yiga qof takhasus leh.
Cameroon: Adolphe Lele Lafrique ayaa ku boorisay dadka isticmaala warbaahinta bulshada in ay siiyaan fursad nabad ah
sida looga ilaaliyo carruurta ka soo jeeda Xnxx, Xvideos iyo goobaha kale X?